Shir looga hadlayo joojinta gudniinka Fircooniga oo Muqdisho ka furmay – Radio Muqdisho
Shir looga hadlayo joojinta gudniinka Fircooniga oo Muqdisho ka furmay
Shir looga hadlayo ka hortagga gudniinka fircooniga oo ay ka qeyb galayaan masuuliyiin ka socoto dhowr wasaaradood ayaa maanta laga furay magaalada Muqdisho.
Shirkani oo la doonayo in lagu sameeyo guddi ka hortaka gudninka fircooniga waxaa ka qeyb galaya wakiilo ka socda wasaaradaha Caddaladda, Amniga, waxbarshadda, Awqaafta iyo diinta iyo wasaaradda haweenka iyo xaquul aadanaha oo qaban qaabisay sharka.
Wasiirka ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xaquul insaanka Muumino Sheekh Cumar oo shirka furtay ayaa ka qeybgalaasha shirka ku boorrisay in ay si wayn u dharaan dhiriyaan arrimaha laga doodayo iyo sidii xal looga gaari lahaa.
“Mudanayaal iyo marwaayin waxan la idinka rajaynayaa in aad masuuliyad iska saartan, la idinka arko in si wada jir ah aan ku wada shaqayno, hay’adaha dowladda iyo ururradda bulshada rayidka. Waxaana idinka mahadcelinaynaa dadaallada ay uga jiraan baabi’inta gudniinka fircooniga ee gabdhaha” ayay tiri Wasiir Muumino.
Wasiir ku xigeenka ayaa ka qeyb galayaasha shirka oo ay ka mid yihiin xubno ka socda bulshada rayidka ah kula dardaarantay inay diiradda saaraan arrinka si ay natiijo wax lagu qaban karo uga soo baxdo shirka.
“mudanayaal waxaan idinka codsanayaa inaad xooga sartaan arintani ku saabsan gudniinka gabdhaha , isla markaan qolo walbo masuuliiyaddeeda taabato wasaaradda haweenka iyo xaquul insaanka iyo hormarinta waxay qaadanaysaa kalinteeda waxayna hada diyaarinaysaa hindise-sharciyeedka gudniinka gabdhaha, waxana qabyo qoraal noo ah baabi’inta siyaasadda gudniinka gabdhaha”.
Culimada Soomaaliyeed iyo dhakhaatiirta caafimaadka ayaa si weyn uga digay gudniinka noociisa loo yaqaano Fircooniga oo dhibaato caafimaad ku haya haweenka Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer doodo diini ah iyo siminaarro ku saabsan arrintaan ku qabatay meelo ka mid ah dalka.